अस्पतालबाट किन चो’री हुँदैछन् धमाधम को’रोना सं’क्रमितका श’व ? यस्तो छ वास्तविक र’हस्य थाहा पाउदा सबै चकित ! – Jagaran Nepal
अस्पतालबाट किन चो’री हुँदैछन् धमाधम को’रोना सं’क्रमितका श’व ? यस्तो छ वास्तविक र’हस्य थाहा पाउदा सबै चकित !
काठमाडौँ। हामीकहाँ को’रोना भाइ’रसबाट मृ’त्यु भएका मानिसहरुको श’व व्यवस्थापनमा सकस भैरहेको छ । शवको अ’न्त्येष्टि गर्न वा सं’क्रमितको श’व छुन त परै जाओस् नजिक आउन पनि मान्छेहरु ड’राउँछन् । तर इण्डोनेसियामा भने पछिल्लो समय को’रोना भा’इरस सं’क्रमितका श’वहरु अस्पताल तथा श’वगृहहरुबाट चो’री हुने घ’टनामा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय इण्डोनेसियामा सं’क्रमित मृ’तकको परम्परागत रुपमा अ’न्त्येष्टिका लागि आफन्तहरुले मृ’तकको श’व चो’री गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।
को’रोना सम्बन्धी क’डा का’नूनका बाबजुत पनि श’व चोरीका यस्ता घ’टना बढेसँगै सरकारले अ’न्त्येष्टि स्थल तथा श’वगृहहरुमा सुरक्षा व्यवस्था क’डा पारेको छ । इण्डोनेसियाको पछिल्लो को’रोना सम्बन्धी नियम अनुसार सं’क्रमित मृ’तकको लासलाई तत्कालै प्लास्टिकमा बेरेर छिटो भन्दा छिटो चिहानमा गाड्नु पर्दछ । यसो गर्दा मुस्लिमहरुको अ’न्त्येष्टि संस्कार पूरा गर्न सम्भव हुँदैन, जहाँ लासलाई गाड्नु अगाडि धुने गरिन्थ्यो ।
को’रोना का’नूनका कारण आफ्नो धार्मिक आस्था बमोजिमको अ’न्त्येष्टि गर्न नपाउने भएका कारण पछिल्ला दिनमा सुलावेसी प्रान्तको मकास्सारका अस्पतालहरुमा श’व खोस्नका लागि मृ’तकका आफन्तहरुको घु’इँचो लाग्ने गरेको छ । अ’न्त्येष्टिका लागि तयारी हालतमा राखिएका कतिपय श’वहरु अस्पतालबाटै चो’री भएका बताइएको छ ।
श’व चोरीको यस्ता घ’टनामा संलग्न ३३ जना अ’भियुक्तलाई प’क्राउ गरिएको छ । उनीहरुलाई का’नून उ’ल्लंघनको अ’भियोगमा ७ वर्षको जे’ल स’जायँ हुन सक्नेछ ।
उता इण्डोनेसियाको दोश्रो सहर सुराबजास्थित एक अस्पतालबाट समेत सं’क्रमितको श’व चो’री भएको छ । उत्तः घ’टनामा संलग्न ४ जना मानिसहरु समेत प’क्राउ परेका छन् । त्यस्तै जाकार्ताको नजिकै पर्ने बेकासी क्षेत्रमा पनि त्यस्तै घ’टना भएको छ । त्यहाँ आफन्तहरुले मृ’तकको को’रोना भा’इरस परीक्षणको नतिजा नआउँदै श’व चो’रेर लगेका छन् । मृ’तकको स्वास परीक्षणको रिपोर्ट ढिलो गरी आएको र मृ’तकमा को’रोना पोजेटिभ देखिएको बताइएको छ।
इरानको एक क्लिनिकमा वि’ष्फोट हुँदा १३ जनाको मृ’त्यु , मृ’तकको संख्या अझै बढ्न सक्ने
काठमाडौ – इरानमा एक क्लिनिकमा वि’ष्फोट हुँदा १३ जनाको ज्या’न गएको छ । इरानको राजधानी तेहराको क्लिनिकमा वि’ष्फोट भएको अन्तराष्ट्रिय मिडियाले जनाएका छन् । बि’स्फोटबाट १३ जनाको ज्या’न गएको भनिए पनि मृ’तकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ । बि’स्फोटमा दर्जनौं घा’इते भएका छन् । ज्या’न जानेमा महिला रहेको बताइएको छ। उक्त बि’स्फोट सीना अतहर क्लिनिकमा भएको बताइएको छ । ग्यास लिक हुँदा वि’स्फोट भएको रआकाशसम्म धु’वाँ देखिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कति छ आजको मूल्य ?
काठमाडौँ । साताको चौँथो दिन अर्थात बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ।
आज छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
त्यस्तै आज तेजावी सुन प्रतितोला ९१ हजार २ सय ६५ रुपैयाँमा को’रो’बार भ’इरहेको छ। हिजो तेजावी सुन ९० हजार ७ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो।
त्यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ। आज चाँदी प्रतितोला ९६० रुपैयाँमा को’रो’बार भ’इरहेको छ। हिजो चाँदी प्रतितोला ९४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
छात्राको १ सय ६० अ’श्लील भिडियो बनाएपछि
सिंगापुरका एक शिक्षकमाथि छात्राहरुको १ सय ६० बढी अ’श्लील भिडियो बनाएको आ’रोप लागेको छ । यो कुराको खुलासा हुनासाथ ४७ वर्षे शिक्षकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गत जून २३ मा यी शिक्षकमाथि महिलाहरुको गोपनियताको अपमान गरेको र समाजमा अ’श्लीलता फैलाएको आरोप लागेको थियो ।
समाचार अनुसार पीडितहरुको पहिचान लुकाउनका लागि सम्बन्धित विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । आरोपीले अप्रिल २०१५ देखि २०१८ जुलाईसम्मको अवधिमा १ सय ६८ वटा अ श्लील भिडियो रेकर्ड गरेका थिए । यीमध्ये केही भिडियोलाई शिक्षकले भाइरल बनाएका थिए ।
आरोपीले अप्रिलदेखि अक्टोबर २०१५ का बीचमा आठ युवतीहरुको १५ भन्दा बढी पटक अ श्लील भिडियो बनाएका थिए । यसबाहेक जून २०१६ मा आरोपीले दोस्रो आठ युवतीहरुको नौ भिडियो रेकर्ड गरेका थिए । यसैगरी सन् २०१७ को जुलाईदेखि नोभेम्बरका बीच ३२ महिलाको १ सय ५ भिडियो क्लिप रेकर्ड गराएका थिए ।
प्रहरीले आरोपितको कर्तुतको पोल कसरी खुल्यो भन्ने कुरा केही बताएको छैन । अदालतमा यो मामलाको सुनुवाई जारी छ । आरोपी दोषी ठहरिए एक वर्षको जे ल सजाय वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । आरोपीले आफ्ना छात्राहरुको भिडियो बनाउने अलावा फेब्रुअरी २०१७ मा आफ्नो एक महिला छिमेकीको भिडियो पनि बनाएका थिए ।
यसको ठीक एक महिनापछि आरोपीले एक सपिङ मलमा अपरिचित महिलाको भिडियो बनाएका थिए । आरोपीलाई जुलाई १४ मा अदालतमा पेश गरिनेछ ।सिंगापुरको शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आरोपीले अब कुनै पनि विद्यालयमा पढाउन पाउनेछैन । उसलाई जुलाई २०१८ बाट नै निलम्बन गरिएको थियो । यदी अदालतले उनीविरु’द्ध लागेको आरोप प्रमाणित गरेमा मन्त्रालयले उनलाई बर्खास्त पनि गर्नसक्नेछ ।